Ngwaọrụ mmeju afọ site na mkpa Mass
Satọde, Ọgọstụ 4, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Fọdụ n'ime unu nwere ike na-ajụ ihe nchịkọta ọdịnaya bụ. Enwere ọdịnaya dị egwu nke a na-ebipụta na weebụ site na Twitter, Facebook, blọọgụ, akụkọ, Youtube na ndị ọzọ. Ohere inweta bụ na ụfọdụ ọdịnaya ahụ bara uru nye ndị na - ege gị ntị - mana ọ chọrọ ụfọdụ nyocha, nzacha na igosi ihe n'uzo bara uru. on Martech Zone, anyị na-edozi ọtụtụ ọdịnaya. Otu ihe atụ bụ infographics. Mgbe anyị hụrụ ọtụtụ n’ime ha, anyị na-akpachara anya iji nyochaa, nyocha, nyochaa ma kọwaa ihe kpatara ha ji daba ndị na-ege anyị ntị yana echiche anyị nwere ike ịbụ.
Nchịkọta ọdịnaya nwere ike inye aka na akara aka gị na ntụgharị saịtị. Cheedị ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịgbakwunye nri dị ndụ nke nkwupụta mmekọrịta, nyocha na tweets n'ụlọ gị site n'aka ndị ahịa nwere obi ụtọ na ezigbo oge. Nke ahụ bara uru ọdịnaya… na ikekwe ọtụtụ mmetụta karịa ọkọlọtọ testimonial ngọngọ ma ọ bụ ahịa logo. Nke a chọrọ ngwaọrụ ekike.
Omume nke ọdịnaya dị na kpụ ọkụ n'ọnụ. Naanị n'ime ọfịs anyị, anyị niile na-agụ ọtụtụ isi mmalite kwa ụbọchị, na-elekọta mmadụ nlekota oru na-akwalite ozi gbasara anyị maka ndị ahịa anyị na ndị asọmpi ha, yana mkpọsa Google na-enyocha ihe ọhụụ na ntanetị Anyị na-arụsi ọrụ ike iji sie nke ọ bụla n’ime isi mmalite ndị a ka anyị nwee ike zigara ndị ahịa anyị ka ha debe ihe ha oge. Ọ chọrọ nchikota ọgụgụ isi, ahụmịhe na teknụzụ iji mee ya n'ụzọ ziri ezi… na ọ bụ usoro na-agagharị na-agbanwe agbanwe.
Ezigbo ihe atụ nke ịhazi ọdịnaya bụ etu telivishọn si ebipụta mmelite twitter nwere ike bụrụ ihe ewu ewu na ndị na-ele ha. Usoro a adịghị mfe - tweets kwesịrị ịdị mkpa, adịghị akwụ ụgwọ ma na-atọ ọchị.
Ihe dị mkpa bụ igwe ojii nke dabeere na ikpo okwu nke na-eme ka ndị na-ere ahịa na mgbasa ozi nwee ike ịhazi nnukwu ọdịnaya na leverage ya maka ndị na-ege ha ntị. Ihe ngosi dị mkpa nke Mass weputara ọdịnaya dị mkpa na Twitter na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ, na -eza mkparịta ụka ewepụtara na iwu akọwapụtara onye ọrụ, ma mepụta ihe ngosi maka ndị na-ere ahịa ka ha tinye na weebụsaịtị, ma tinye na ngwa mkpanaka, gosipụta na TV, mado na ebe nchekwa , ma ọ bụ mee ihe ọ bụla ọzọ.
Ihe dị mkpa na-enye ndị na-ere ahịa usoro nke ngwa eji arụ ọrụ ma ọ bụ modulu, nke na-arụ ọrụ na-enweghị onwe ya na njikwa ọrụ raara onwe ya nye, ma ọ bụ dịka akụkụ nke nnukwu ikpo okwu na-ejikọta modulu abụọ ma ọ bụ karịa.
Ngwaọrụ ma ọ bụ modulu na-enye gụnyere:
Nkọwapụta Ngwaahịa dịka Ugo Ochie weghara gwa kpakpando ratings na Okwu Nkwupụta weghara mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ngwa njikọ aka dịka Tredị nddị nke jiri anya nke uche hụ omume ọha na eze, Mass iyi nke na-edozi mkparịta ụka mmekọrịta ma họrọ ngosipụta ziri ezi, Osisi Mass nke na - eweputa onyonyo ihe osise na onyonyo site na mmiri iyi di iche, Udu ndi isi nke na-enye ọhaneze mmekọrịta ma na-akwalite ndị kacha arụ ọrụ n'obodo, Maapụ Maapụ nke gosipụtara ọdịnaya mmekọrịta site na mpaghara mpaghara, Ugo Ochie nke n’eme ka mputa nke oru ihe ndi n’eme.
Mmekọrịta ngwaahịa dịka Azịza Mass nke na-eme ka ndị na-ere ahịa biputere ndị na-ege ntị ozugbo ma na-achịkwa iyi azịza na Nnukwu Ntuli Aka nke na-enyere mmadụ aka ịme ntuli aka.
Ihe dị mkpa na-enye azịza a na-esote iji jikọta otu ma ọ bụ karịa nke ngwaọrụ ndị a dị n'elu:
Enyi nke jikọtara ọdịnaya dị ike na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Onye nduzi nke na-achikota onu ogugu mmadu na isiokwu ma obu ihe omuma.
Flock-To-Kpọghe iji nye ọdịnaya na-enweghị ike ịnweta site na nsonye obodo
zeitgeist a multi layered dashboard nke na-enye nchikota nke ọrụ niile na-elekọta mmadụ n'ụzọ ahaziri ahazi ma dịkwa mfe ịchịkwa
iji Ihe dị mkpa, ndị na-ere ahịa nwere ike ijikwa ma ọ bụ mee ihe ọ bụla metụtara akara na mgbasa ozi mgbasa ozi. Uru nke mwebata na-enyefe ndị ahịa na atụmanya na-eme ka ahụmịhe ha dị elu ma nye ohere maka njikọ aka ka mma.
Tags: nchịkọta ọdịnayanhazimkpacuration twitter
Blur Marketing Exchange: Ẹtop, Chọta, igbu